केरा बगानमा रातभर कसले यस्तो वितण्डा मच्चायो ! « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
केरा बगानमा रातभर कसले यस्तो वितण्डा मच्चायो !
१८ बैशाख २०७५, मंगलवार १५:१०
चितवन, वैशाख १८ । कालिका नगरपालिका वडा नं ६ मा अज्ञात समूहले गएराति केरा बगान फँडानी गरेको छ ।
कालिका नगरपालिकाको वडा नं ६ गुरौ चौरमा स्थानीय १२ किसानले लगाएका तयारी अवस्थामा रहेको तीन हजार १०० भन्दा बढी केराका बोट रातको समयमा फाँडिएको थियो ।
केरा व्यवसायी समितिका जिल्लाअध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले रातको १० बजेपछि रातभर केरा फँडानी गरिएको हुनसक्ने बताए । उनका अनुसार फाँडिएका केराको मूल्य १५ लाखभन्दा बढी छ ।
फँडानी गरिएका केरा अधिकांश पसाएको अवस्थाका थिए ।
स्थानीय पीडित किसान गोपी लामिछानेले आफ्नो दुई कट्ठा १० धुरमा रहेका सबै ३०० बोट केरा फँडानी भएको बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय कोपिला दाहालको झण्डै १५ कट्ठा क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा फाँडिएको छ । उनले भने, ‘यस क्षेत्रका १२ कृषकको केरा फाँडिएको देखिएको छ । अरुको के छ हेर्न बाँकी छ ।’
जिल्लामा दुई हजार ६५० बिगाहमा व्यावसायिक केरा खेती हुँदै आएको छ । ६ सय ३० जना किसान यो व्यवसायमा आबद्ध छन् । (रासस)
भृकुटीमण्डपमा प्लास्टिक मेला सुरु